कान्स, प्रियंका कार्की र नेपाली आलोचकहरु - Kendrabindu Nepal Online News
कान्स, प्रियंका कार्की र नेपाली आलोचकहरु
नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा नायिका प्रियंका कार्की अहिलेकी निर्विकल्प एक नम्बर नायिका हुन । केही कन्ट्रोभर्सीहरुलाई छोड्ने हो भने बौद्धिकतामा पनि उनी अगाडि नै छन् । अमेरिकामा पढेकी र ‘ठुलो घराना’ मा ताल्लुकात भएकी उनको केही पत्रकारहरूले खेदो पनि प्राथमिकताका साथ खन्ने गरेका छन् ।
कान्समा उनको सहभागितालाई लिएर विभिन्न खाले तर्क वितर्कहरु आए बजारमा । एक जना नाम चलेका पत्रकारले त ठुलै पत्रिकामा प्रियंकाको कारण नेपाललाई लज्जा बोध भएको सम्म लेख्न भ्याए । अब प्रश्न उठ्छ, के उनको कान्समा भएको उपस्थिति नेपालको लागि लज्जाबोधको विषय हो त ? अहँ त्यस्तो कदापी होइन । प्रियंकाको कान्स फिल्म फेस्टिभलमा भएको सहभागिता अन्य देशका नायिका सरहको भएन त्यो हामी सबैले देख्यौँ । अन्य सरहको नहुँदैमा लज्जा बोध गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हुन्छ त्यो भने ती पत्रकारले प्रष्ट्याउन सकेका छैनन् ।
ठुलो पत्रिकाको पत्रकारले लेखेपछि फेसबुकेहरु पछि नलाग्ने कुरै भएन । तमाम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले हावामै प्रियंकाको मजाक उडाएको देख्न पाइयो, त्यसरी प्रियंकाको मजाक उडाउने काममा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय केही महिलाहरू झन् जोडतोडसँग लागेको समेत देखियो तर यथार्थ बुझ्ने तर्फ कोही लागेन ।
अरुपनि कैयन देशका नायिकाहरू थिए जो कान्समा सहभागी त थिए तर पनि उनीहरूको रेड कार्पेट ईन्ट्री पहिलो प्राथमिकता वाला थिएन । त्यहाँ रेड कार्पेट ईन्ट्रीका चरणहरू हुन्छन् । कुन सहभागी कलाकारको कस्तो स्वागत गर्ने, कसले कुन लेभलको एनाउन्समेन्ट पाउने र कसले नपाउने भन्ने कुरा पूर्व कार्यक्रमको निर्धारित कुरा हो । त्यो सबै कुरा तोकिएको हुन्छ । निमन्त्रणा जुन किसिमको हो त्यही अनुसारको स्वागत पाउनु नियम अनुसारको कुरा हो ।
आलोचक पत्रकारले प्रियंकाको स्वागत अन्तर्राष्ट्रिय स्टार कलाकारकै हाराहारीको हुनुपर्ने आशा किन राखे त्यो बुझ्न सकिएन । ती पत्रकारले कान्सको बारेमा बुझ्दै नबुझी एकोहोरो प्रियंकाको निम्नास्तरको आलोचना गर्नुमा उनको कुन स्वार्थ थियो त्यो उनी जानुन् ।सबैभन्दा पहिले त्यहाँ पुरस्कृत हुने फिल्म सम्बद्ध ‘कास्ट एण्ड क्रु’ अथवा त्यहाँ पुरस्कृत हुने सिनेमाका ‘लिड क्यारेक्टर’ हरूले रेडकार्पेटमा एनाउन्समेन्ट सहितको ईन्ट्री पाउँछन् ।
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सुपरस्टारहरू जसलाई कान्स आयोजकले विशेष निमन्त्रणा पठाएको हुन्छ जो उक्त फेस्टिभलको शोभा बढाउन आएका विशेष अतिथिहरू हुन्छन् तिनीहरूको अनाउन्समेन्ट सहितको रेड कार्पेट ईन्ट्री हुन्छ ।
तेस्रोमा स्पोन्सरका ब्राण्ड एम्बेष्डरहरु हुन्छन् जो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ख्याति प्राप्त समेत हुन्छन् । प्रडक्टको विज्ञापन गर्ने मुख्य प्लेटफर्म भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डहरु जसले कान्स फेस्टिभलमा लगानी गरेका हुन्छन् ती कम्पनीका ब्राण्ड एम्बेसडरले रेडकार्पेटमा एनाउन्समेन्ट सहितको ईन्ट्री पाउँछन् जुन विज्ञापन सरहको ‘पे इन्भीटेसन्’ सरहको ईन्ट्रि हो । त्यसपछि तोकिएका पाहुना र अन्य निम्तालुको पालो आउँछ । त्यसमा रेड कार्पेट ईन्ट्री त हुन्छ तर कान्सको तर्फबाट स्पेसल एनाउन्समेन्ट हुँदैन । यो साधारण पाहुनाले पाउने स्वागत हो र प्रियंका साधारण निम्तालुको हैसियतमा कान्समा सहभागी थिइन ।
साधारण निम्तालु मध्ये पनि ‘अनुभवी’ सहभागीहरूले आफ्नो रेड कार्पेट ईन्ट्रीलाई विशेष बनाउन आफ्नै तरिकाले पहल गर्न सक्छन् जस्तै आफ्नै फोटोग्राफर, आफ्नै तरिकाले भिडियो खिचेर टेलिकाष्ट या लाइभ गर्ने क्रु, मेकअप ड्रेस डिजाइनर को टिम सबै व्यवस्था आफ्नै खर्चमा गरेर पनि कान्सको रेड कार्पेट ईन्ट्रीलाई विशेष बनाउन पाइन्छ ।
प्रियंकाले नै पनि त्यसो गर्न सक्थिन तर उनमा अनुभवको कमी भयो र उनलाई स्पोन्सर पनि प्राप्त भएनन् होला । त्यो सबै तारतम्य मिलाउन ठुलो खर्च लाग्छ स्पोन्सर बिना सम्भव पनि हुँदैन । अनुभव भएको भए स्पोन्सर पाउन प्रियंकालाई गाह्रो कुरा थिएन तर पहिलो पटक हुनाले उनमा अनुभवको कमी देखियो तसर्थ त्यसो उनको कान्सको सहभागिता साधारण रह्यो । त्यही विषयलाई लिएर नेपाली पत्रकारहरूले उनको सहभागिताको बारेमा निम्नस्तरको टिप्पणी गरिदिए जुन दुखद कुरा समेत हो ।
अब प्रश्न उठ्छ, के नेपाली नायिकाको रेड कार्पेट ईन्ट्री अन्यको जस्तो भएन भनेर हामीहरूले लज्जा बोध गर्नु पर्छ ? अहँ कदापि पर्दैन । हाम्रो जस्तो बामे सर्दै गरेका दर्जनौँ मनोरञ्जन क्षेत्रका सेलिब्रेटीहरुले प्रियंकाकै स्तरमा कान्समा सहभागी जनाएर फर्केका छन् र उनीहरूले गर्व गरेका छन् । उनीहरूका फ्यानले सपोर्ट पनि गरेका छन् ।
खुच्चिङ मनाउने नेपाली परम्परा नै हो । अनाउन्समेन्ट सहितको रेड कार्पेट ईन्ट्री पाएको भए पनि उनको आलोचना गर्न कुनै न कुनै पत्रकार निस्कन्थ्यो र खिसी ट्युरी गरेर लेख्थ्यो पक्कै पनि अनि सामाजिक सञ्जाल आँखा चिम्लेर पछि लाग्थ्यो यसमा दुई मत छैन ।
हामीले साधारण रूपमा बुझ्न सक्ने कुरा हो । जुन सूचना उनले कान्स जानु अगाडि दिएकी थिइन त्यस अनुसार उनको सहभागिता एकदम ठिक छ । हामीले भारतीय नायिकाहरूको बराबरी किन गर्न सकिनन् भनेर आलोचना गर्न व्यर्थ छ । भारतीय ब्राण्डहरू कान्सका सबैभन्दा ठुला स्पोन्सर हुन र तिनका ब्राण्ड एम्बेसडरको बराबरी गरिनन् भनेर अथवा सयौँ करोडको व्यापार गर्ने सिनेमाकी नायिकाको जस्तो बराबरीको स्थान पाइनन् भनेर प्रियंकालाई गिज्याउनु मूर्खता सिवाय केही हुन सक्दैन ।
देशकै बेईज्जत गर्नेगरी प्रियंकाको नौटंकीः अति भएन र..?
कान्स फिल्म फेस्टिबलका उत्कृष्ट फेसन र ग्ल्यामर (९ तस्बिरमा)